Madaxweyne Geele Muxuu Ka Yidhi Saldhigyada Milatari Ee Dalkiisa
Tuesday 17th April 2018 10:37:58 in Wararka by Xarunta Guud
Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele, ayaa sheegay in dalalka ku leh saldhigyada milatari dalkiisa Djibouti, aanay ahayn qaar u socda istaraataji iyo tartan ee ay u joogaan Djibouti arrimaha ammaanka iyo nabadgelyada gobalka. "Saldhigyadayadu waxay la dagaalamaan argagixisada.” Ayuu yidhi.
Madaxweyne Geele oo dalka Sucuudiga oo uu kaga qayb galay shirkii madaxda Carabta ugu waramay wargeyska Al Sharqal Awsat, ayaa yidhi "Ujeedadoodu maaha inay tartan caalami ah ka abuurayaan oo ku salaysan dhaqaale iyo dano istaraatajiyadeed, ee waxa weeye la dagaalanka argagixisada iyo budhcad badeeda.” Ayuu yidhi Madaxweyne Geele oo sheegay inaanay saldhigyadu dhib nabadgelyo darro ahayn, waxaanu intaas raaciyay "Waxaanu ku faraxsanahay inaanu ka shaqaynano ammaanka, dgenaanshaha iyo horumarka dalkayaga.”
Isagoo madaxweyne Geele, hadalkiisa sii wata wuxuu yidhi "Waxaanu rajaynaynaa inaanu door muhiim ah ka ciyaarno geeska afrika iyo bariga afrika si loo gaadho dhaqaale sugan iyo degenaansnaho siyaasadeed.”
Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele, waxa kale oo uu ka hadlay xaaladda ay ku suganyihiin dalal Carbeed oo badani sida Soomaaliya, Ciraaq, Suuriya, Yemen iyo Liibiya iyo weliba Falastiin.
[Akhriso:-] Tirada Xildhibaanada Ee Madaxweyne Xasan Sheekh Gurigiisa Dhex Degtay Iyo Siyaasadda Laga Maleegayo
Safiirka Soomaaliya U Fadhiya Waddanka Ingiriiska Oo Ka Hadlay Qorshaha Ingiriiska Ee Soomaaliya [Somaliland Muxuu Ka Yidhi?]
[War Deg Deg Ah:-] Xogle-toosiye Oo Afka U Furtay Madaxweyne Biixi Iyo Xukuumaddiisa , Buuhoodlena Ku Faanay [Live]
Madaxweyne Muuse Biixi Oo Walaac Ka Qaba Shirarka Beelaha Habar Jeclo Kaga Dhawaaqeen Gobolada Bari [Warbixin:-]
[Akhriso:-] Hogaamiye kooxeed Hore Oo Laga Mamnuucay Murashax Madaxweynenimo Inuu Noqdo [Waa Kuma?]